राष्ट्रपतिका उम्मेदवार : विद्या र 'केबी सर' (जीवनी र राजनीतिक यात्रा)
Wed, Jun 19, 2019 | 13:21:04 NST
18:19 PM (4years ago )
काठमाडौं, कात्तिक १० - बुधबार हुने राष्ट्रपति उम्मेदवारमा जसले जितेपनि एउटा इतिहास कोरिनेछ । एमाले उम्मेदवार विद्या भण्डारी विजयी भएमा देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउनेछ । यस्तै कांग्रेस उम्मेदवार कुलबहादुर गुरुङले जितेमा उहाँ जनजातिको तर्फबाट पहिलो राष्ट्पति बन्नुहुनेछ । गणितीय हिसाब गर्दा विद्या भण्डारीको जित सुनिश्चित देखिन्छ । तर गोप्य मतदान भएकाले क्रस भोटिङको समेत सम्भावना हुने भएकाले यसै भन्न सकिन्न ।
राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारको जीवनी र राजनीतिक यात्रा यस्तो छ :
भण्डारीको जन्म वि.सं. २०१८ साल असार ५ गते भोजपुरको गुराँसेमा भएको हो । उहाँको बुबाको नाम रामबहादुर पाण्डे र आमाको नाम मिथिला पाण्डे हो । २०३५/०३६ सालदेखि प्रगतिशील विद्यार्थी आन्दोलनमा क्रियाशील उहाँले २०३७ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माले)मा सङ्गठित हुनुभयो ।
२०३९ सालमा मदन भण्डारीसँग उहाँको विवाह भयो । २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधन भएपछि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा देखिन थाल्नुभएको हो । २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा उहाँ काठमाडौं– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बन्नुभयो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन तथा २०५६ सालमा भएको तेस्रो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं– २ बाट समेत निर्वाचित हुनुभयो । यहाँ यसअघि रक्षा मन्त्री समेत भैसक्नुभएको छ । २०५४ सालदेखि उहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्षका रूपमा रहनुभयो । २०५४ सालमा सम्पन्न पार्टीको छैटौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकी भण्डारी आठौं र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो ।
जन्म : २०१८ साल असार ५
जन्मस्थान : भोजपुर जिल्ला, मानेभञ्ज्याङ गाविस
पिता : स्व.रामबहादुर पाण्डे
माता : मिथिला पाण्डे
बाल्यकाल—शिक्षा : बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालय, भोजपुर
माद्यमिक शिक्षा : बिद्योदय व्यवसायिक सेकेन्डरी स्कुल
कलेज : भोजपुर क्याम्पस, भोजपुरबाट आई. ए. उतिर्ण
महेन्द्र मोरड कलेज विराटनगरमा बि.ए.अध्ययन
विवाह : तत्कालिन नेकपा (माले) का नेता मदनकुमार भण्डारीसँग २०३९ सालमा पार्टीको आयोजनामा बिबाह
छोरीहरु : उषाकिरण भण्डारी (२०४१ मा जन्म) र निशाकुशुम भण्डारी (२०४४ मा जन्म)
राजनीतिक यात्रा -
२०४६ मा कीर्तिपुरमाभएको अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो सम्मेलनमा मोरङको तर्फबाट प्रतिनिधी
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुभएका कुलबहादुर गुरुङ शालिन राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेका उहाँ लाभको पदमा कमै बसे पनि २००७ सालदेखि अहिलेसम्मै राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छाइरहनुभएको छ ।
मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका उहाँ नातावाद, कृपावाद नरुचाउने र निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिका रुपमा जिल्लामा परिचित हुनुहुन्छ । इलाम नगरपालिका–२ स्थित पुख्र्यौली घरमा विक्रम संवत १९९२ मंसिरमा जन्मिएका गुरुङ इलामको राजनीतिक वृत्तमा 'केबी सर'का नामले परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ जन्मिएको पुख्र्यौली घर चियावारीमाझको डाँडामा अझै सुरक्षित छ, जहाँ उहाँका भाइको परिवार बस्दै आएको छ । त्यही घरबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका गुरुङ तीनपल्ट मन्त्री भैसक्नुभएको छ ।
संविधानसभामा अध्यक्षको विधिवत निर्वाचन हुनु अघिसम्म ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा कार्यभार सम्हालेका गुरुङ राणा शासन विरोधी, पञ्चायत विरोधी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन विरोधी सबै आन्दोलनहरूमा प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय हुनुभयो । शुरुदेखि नै कांग्रेसमा आबद्ध गुरुङ झण्डै सात दशक लामो राजनैतिक जीवनमा पार्टीका विभिन्न तह, पद र जिम्मेदारी पूरा गर्दै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी दिन पुग्नुभएको हो ।
विभिन्न समयमा गरी तीन वर्ष जेल जीवन बिताएका गुरुङले निर्वासित जीवन बिताएको इतिहास छ । यस क्रममा २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइराला भारतको निर्वासनबाट स्वदेश फर्कंदा उहाँ पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
इलामकै आदर्श उच्चमावि (हाइस्कुल) बाट एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि दार्जिलिङको सरकारी कलेजबाट आइएस्सी उत्तीर्ण गुरुङले पछि काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बी.एड. सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभयो । त्यसअघि गुरुङले आदर्श हाइस्कुलमा नै उप–प्राध्यापकको रुपमा झण्डै एक दशक अध्यापन गर्नुभएको थियो ।
संविधानसभा पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल समेतलाई उहाँले पढाउनुभएकाे थियाे ।
काँग्रेसबाट समानुपातिक सभासद रहेका गुरुङ २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा इलाम–२ बाट संसदमा निर्वाचित हुनुभएकाे थियाे । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ इलाम–३ बाट निर्वाचित हुनुभयाे । उहाँ २०४८ र २०५६ मा पनि संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयाे । हाल का७माडाै‌मा बसोबास गर्ने गुरुङको परिवारमा श्रीमती रत्न, दुई छोरी रोशनी र प्रविणा तथा एक छोरा कौस्तुभ छन् ।